July 2021 - Celegroup
တရုတျနိုငျငံက ကွောကျစရာ ရလှေမျးမိုးမှုဖွဈစဉျနှငျ့ ထူးခွားလှတဲ့ ကောငျးကငျမှ ရမြေားစုပျယူနတေဲ့ရုပျသံဖိုငျ
July 31, 2021 cele group 0
တရုတျနိုငျငံက ကွောကျစရာ ရလှေမျးမိုးမှုဖွဈစဉျနှငျ့ ထူးခွားလှတဲ့ ကောငျးကငျမှ ရမြေားစုပျယူနတေဲ့ရုပျသံဖိုငျ တရုတျနိူငျငံ Guangzhou တှငျရလှေမျးမိုးမှု့ နှငျ့အတူထူးခွားဖွဈစဉျအတိတျနိမိတျ ဇူလိုငျလ (၃၀)ရကျနတှေ့ငျGuangzhou တှငျ တဈနာရီကြျောသာမိုးရှာခဲ့ပမေယျ့ လမျးအားလုးံ နီးပါးရလှေမျးမိုးခဲ့သညျ……. မွအေောကျဘူတာသညျ ရမြေားဖွငျ့ပွညျ့နှကျနပွေီး (၆)ပအေထိ ရတေကျခဲ့သညျဟု သိရသညျ……. မိုးမရှာသှနျးမညျ Guangzhou Nansha တံတား အနီး၌ ကောငျးကငျမှရမြေားစုတျယူနသေညျ့ ထူးခွားအံ့ဖှယျဗှီဒီယိုကိုလညျး ဒသေခံမြားက ရိုကျကူးထားကွသညျ……. Credit-𝓣𝓱𝓮𝓽 𝓜𝓪𝓾𝓷𝓰 Zawgyi တရုတ်နိုင်ငံက ကြောက်စရာ […]
ဖုန်းသုံးသူတိုင်း….သိထားသင့်တဲ့ ….ဖုန်းလေးလံခြင်းကို… ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့်… အချက်များ
ဖုန်းသုံးသူတိုင်း….သိထားသင့်တဲ့ ….ဖုန်းလေးလံခြင်းကို… ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့်… အချက်များ ၁. နေရာလွတ်ပြည့်နေခြင်း Storage 16GB လောက်ကို 500MB လောက်ပဲ ကျန်အောင် ပြွတ်သိပ်သွင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ဖုန်းလေးလံလာမှာအမှန်ပါပဲ။ ဖုန်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ App cache တွေကလည်း နေရာအများကြီးယူပါတယ်။ ဒီတော့ အသုံးမလိုတဲ့ App တွေကိုဖျက်ပစ်ပါ။ Junk File တွေ Cache file တွေကို နေ့စဉ် ဖုန်းမှာ နဂိုပာဝင်တဲ့ Cleaner နဲ့ရှင်းလင်းပေးပါ။ […]
အလှူဒါနပြုပြီးတိုင်းမှာ ဘာကြောင့်ရေစက်ချရသလဲ ?
အလှူဒါနပြုပြီးတိုင်းမှာ ဘာကြောင့်ရေစက်ချရသလဲ ? ကုသိုလ် ကောင်းမှုတွေ ပြုပြီးတိုင်း အထူးသဖြင့် အလှူ ဒါန ပြုပြီးတိုင်းမှာ ရေစက်ချ အမျှဝေ လေ့ရှိတာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုပါ ။ . ။ မိမိတို့ရဲ့ ကုသိုလ် ကောင်းမှု များကို ဝသုနြေ္ဒ မြေစောင့်နတ်ကို သက်သေ ပြုရတဲ့ အနေနဲ့ ရေစက်ချတယ်ဆိုတာတော့ အများ သိပြီး ဖြစ်ပါတယ် ။ . ။ […]
အိပျမရအောငျ ဆိုးနတေဲ့ခြောငျး ခကျြခွငျး လဈသှားမယျ
အိပျမရအောငျ ဆိုးနတေဲ့ခြောငျး ခကျြခွငျး လဈသှားမယျ ကွကျသှနျနီ နဲ့ ခြောငျးဆိုး ပြောကျအောကျ ကုသတာပဲ ဖွဈပါတယျ အသုံးပွုပုံလေးကတော့ ကွကျသှနျနီခွောကျလုံး လောကျကို ပါးပါးလေး လှီးလိုကျပါ ၎င်းငျးကို ပြားရညျ ခှကျဝကျနှငျ့ ရောစပျကာ ဆူပှကျ နတေဲ့ အိုးအပျေါမှာ တငျထားတဲ့ လကျကိုငျပါ ဒယျအိုးဖွငျ့ ထညျ့လိုကျပါ အဖုံးအုပျပွီး ရနှေေး ငှနှေ့ငျ့ ၂ နာရီကွာ အပူ ပေးလိုကျပါ အရညျမြားကို စဈလိုကျပွီး […]
ကိုဗဈဖွဈလို့ ဆေးကုရနျ မနျးလေးကသူပိုငျတဲ့ တိုကျအိမျကွီးစီ ပွနျလာခဲ့သျောလဲ သားဖွဈသူမှ အိမျထဲအဝငျမခံသဖွငျ့ သဆေုံးခဲ့ရတဲ့ ထိပျတနျးကြောကျသူဠေးကွီး ကိုဗဈနဲ့အစုနျအဆနျ မန်တလေး နဲ့သိပျမဝေးလှ တဲ့ မွို့လေး တဈမွို့ မိုးကုတျက… အသကျ ၈၀ ကြျော …သနျသနျမာမာ ၊အလုပျတှလေညျး …လုပျနိုငျသေး တဲ့ သူဌေးကွီး တဈ ယောကျ အောကျစီဂငျြတှေ ကလြာ လို့ ဆိုပီး နယျမွို့စဈ -‘P ‘တှေ့ ပီး မနျးရှမွေို့တျော […]
1 ရက် 3000 စုယုံနဲ့သူဌေးဖြစ်ပြီလား…
1 ရက် 3000 စုယုံနဲ့သူဌေးဖြစ်ပြီလား .. ဟိုနေ့က စာလေးတစ်ပိုဒ်မြင်လိုက်ရတယ်…. တစ်ရက် ၁၀၀၀ စုရင် ၅ နှစ် ၁၈ သိန်း… တစ်ရက် ၃၀၀၀ စုရင် ၅ နှစ် ၅၄ သိန်း ဆိုပြီးတွက်ပြထားတာ တစ်ရက် သုံးထောင်စု…. နောက်၅နှစ် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစနိုင်တယ်ဆိုပြီး တွက်ပြထားတယ်။ မှန်လားဆိုတော့ မမှားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သေချာတွက်ကြည့်ပါ…. ၁။ ငွေ ကြေးပြောင်းလဲမှု ပထမဆုံး […]
အမျိုးသမီးများတွင်ရှိသောထင်ရှားသော မှဲ့(၇)မျိုး (1) ရတနာဆံကျစ်လို့ခေါ်တဲ့ မှဲ့ရယ် (2) ရတနာဆီမီးထွန်းဆိုတဲ့မှဲ့ရယ် (3) မျက်ရည်ခံမှဲ့ရယ် (4) ဘယ်ဘက်မျက်ရည်ခံမှဲ့(ညာရယ်) (5) နှုတ်တဆိတ်ဆိုတဲ့မှဲ့ရယ် (6) ရွှေပိတုန်းစုပ်ဆိုတဲ့မှဲ့ရယ် (7)်စံပယ်တင်(ညာဘက်)မှဲ့ရယ်ဆိုပြီး အမျိုးသမီးတွေအတွက်အထင်ကရမှဲ့(၇)မျိုးရှိတယ်… အဲဒီမှာရင်ဘတ်အလယ်မှာထင်ထင်ရှားရှားမှဲ့တစ်လုံးတည်းထင်းထင်းကြီးရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲဒီမှဲ့ကို၇တနာရွှေအိုးလို့ခေါ်တယ်အဲဒီမှဲ့ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာများသောအားဖြင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာလေ့ရှိတယ်… နာမည်ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားတတ်တယ်နောက်ပြီးသူတို့တွေဟာအလုပ်ဌာနတွေမှာအကြီးအကဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်လေ့ရှိတယ်… သူတို့တွေဟာဆင်းရဲရင်လဲခနပဲဆင်းရဲတွင်းတဲကျနေရင်လည်းခနပဲမုချကြီးပွားချမ်းသာမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်အဲဒီလို၇တနာရွှေအိုးမှဲ့ပါနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ ကျော်နီပတ္တမြားစိန်နှစ်သက်ရာတစ်ခုခုကိုလက်သူကြွယ်မှာဝတ်ဆင်ထားရင်ထူးထူးခြားခြားကံမြင့်မားမယ်နောက်တစ်ခုကနဖူးရဲ့ဘယ်ဘက်မှာထင်ထင်ရှားရှားမှဲ့တစ်လုံးတည်းထင်းထင်းကြီးရှိနေတယ်… ဆိုရင်အဲဒီမှဲ့ကိုကျတော့ရတနာဆီမီးထွန်းလို့ခေါ်တယ်အဲဒီလိုမှဲ့ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကြတော့ပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာကြတယ်အိမ်ထောင်ဘက်ကောင်းနဲ့ဆုံတွေ့နိုင်ကြတယ်… နောက်ပြီသားကောင်းသမီးကောင်တွေထွန်းကားကြတယ်ပြောရရင်တော့မိဘထက်မြတ်တဲ့သားသမီးတွေနောက်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့သားသမီးရတနာတွေကိုဖွားမြင်နိုင်ကြတယ်… ဘာသာရေးဆိုရင်လည်းအရမ်းစိတ်ဝင်စားလေ့ရှိတယ်တစိုက်မတ်မတ်လုပ်လေ့ရှိတယ်ဒီဘ၀တွင်ဘာသာတရားလိုက်စားမယ်ဆိုရင်တရားထူးတရားမြတ်တောင်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်… နောက်တစ်မျိုးကဘယ်ဘက်မျက်ခန်းနဲ့အထက်နှုတ်ခမ်းကြားထင်ထင်ရှားရှားမှဲ့တစ်လုံးတည်းထင်းထင်းကြီးရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲဒီမှဲ့ကိုမျက်ရည်ခံမှဲ့လို့ခေါ်တယ် ဘယ်လောက်ပဲငွေကြေးတွေစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေပြည့်စုံနေပေမယ့်စိတ်ဆင်းရဲရတတ်တယ်သောကများမယ်ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ကတည်းကကြန်းတမ်းတဲ့ဘ၀ခရီးကိုအကွေ့အကောက်များစွာနဲ့ဖြတ်သန်းရတတ်တယ်… နောက်ပြီးအိမ်ထောင်ဆက်လဲများတတ်တယ်သူတို့တွေဟာအနက်ရောင်ဆိုရင်လုံးဝမ၀တ်သင့်ဘူးရှောင်သင့်တယ်ကျောက်စိမ်းကိုလည်းမ၀တ်သင့်ဘူးစ်ိန်ဥဿဖယာပုလဲစတဲ့ရတနာတစ်ခုခုကိုကိုယ်နဲ့မကွာ ၀တ်ထားသင့်တယ်နောက်မှဲ့တစ်မျိုးကိုကြတော့ညာဘက်အောက်မျက်ခမ်းနဲ့အထက်နှုတ်ခမ်းကြားမှာထင်ထင်ရှားရှားမှဲ့တစ်လုံးတည်းထင်းထင်းကြီးရှိနေတယ်ဆိုရင်မျက်ရည်ခံကြီးလို့ခေါ်တယ်… သူတို့ရဲ့ဘ၀တစ်လျှောက်ဆုံးရှုံးမှု့ကြီးများစွာနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပြီးအသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရတတ်တယ်မမျှော်လင့်ပဲခင်ပွန်းသည်သေဆုံးတတ်ပြီးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မုဆိုးမဖြစ်တတ်တယ် အဲဒီမျက်ရည်ခံမှဲ့ကြီးရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာဘာသာတရားကိုအထူးလိုက်စားပြီးကိုယ်ကျင့်တရားအထူးကောင်းမွန်အောင်နေထိုင်ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှု့တရစပ်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရမယ်အကျင့်သီလကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေထိုင်ရမယ်မွေးနေ့တိုင်းပန်းဆီမီးရေချမ်းကပ်လှူပူဇော်သင့်တယ်စိန်ဥဿဖယားလက်ဝတ်ရတနာတို့ကိုဝတ်ဆင်ဆောင်ထားသင့်တယ်နောက်မှဲ့တစ်မျိုးကိုကြတော့ နှုတ်တဆိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်ဘက်ပါးပြင်ပါးစပ်နားမှာထင်ထင်ရှားရှားမှဲ့တစ်လုံးတည်းထင်းထင်းကြီးရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲဒီမှဲ့ကိုနှုတ်တဆိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲဒီမှဲ့ပိုင်ရှင်တွေဟာစကားပြောအတော်ပြေပြစ်တယ် ကြတယ်ချိုသာကြတယ်စကားပြောပရိယာယ်ကြွယ်ဝတယ်မူယာမာယာများတတ်ကြတယ်အသိသာဆုံးကယောက်ျားများ၏ချစ်ခင်မှု့စွဲလန်းမှု့များရလေ့ရှိတယ်အဲဒီမှဲ့ပိုင်ရှင်များဟာစိန်ရယ်မြရယ်ပြောင် ခေါင်းစိမ်းရတနာတို့ကိုဝတ်ဆင်သင့်တယ်အနီရောင်ပန်းပွင့်များကိုမကြာခဏဆိုသလိုဘုရားကိုကပ်လှူပေးရင်ကံဇာတာပိုပြီးမြင့်မားစေတယ်နောက်မှဲ့တစ်မျိုးကရွှေပိတုန်းစုပ်လို့ခေါ်တယ်ညာဘက်ပါးပြင် […]
လူတစ်ယောက် ဘဝမှာ ဘာကြောင့်မပျော်ရွှင်ရတာလဲ …?
လူတစ်ယောက် ဘဝမှာ ဘာကြောင့်မပျော်ရွှင်ရတာလဲ …? (1) ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း” မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိခြင်းက သင့်ဘဝကို ပျော်စရာတွေပျောက်ဆုံးစေမယ့် တစ်ခုတည်းသော အရာပါ …။ ယုံကြည်မှု မရှိရင် ဘယ်အရာကိုမှ မလုပ်ရဲပဲ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ အားငယ်စိတ်တွေပဲ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ် …။ (2) ကိုယ့်ကိုယ်ကို သူများနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်း” ကိုယ်ကသူမဟုတ်တဲ့အတွက် ဘယ်တော့မှ သူများနဲ့မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့ သူ့မှာလဲ သူ့တန်ဖိုးနဲ့သူရှိသလို သင့်မှာလဲ သင့်တန်ဖိုးနဲ့တူတဲ့အရာတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တန်ဖိုးခြင်းမတူတော့ ရလဒ်ခြင်းလဲ […]
အဆုတ်ကို အားကောင်းစေပြီး မိမိကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်လို့ရတဲ့ သဘာဝနည်းလမ်း(၅)မျိုး
အဆုတျကို အားကောငျးစပွေီး မိမိကိုယျတိုငျလညျး လုပျလို့ရတဲ့ သဘာဝနညျးလမျး(၅)မြိုး ၁။ ရနှေေးငှေ့ ရှုခွငျး ရနှေေးငှေ့ ရှုခွငျးသညျ အဆုတျလမျးကွောငျးပှငျ့စပွေီး ခြှဲမြား ပြျောစပေါတယျ။ အဆုတျမကောငျးသောသူမြားသညျ အေးသောအခြိနျ သို့မဟုတျ ပူသောအခြိနျတှငျ မိမိအဆုတျလက်ခဏာ ပိုဆိုးတတျကွောငျး သတိပွုမိတတျပါတယျ။ ရာသီဥတုအပွောငျးအလဲကွောငျ့ အဆုတျတှငျ ခြှဲဆို့တတျပါတယျ။ ရနှေေးငှကွေ့ောငျ့ လကေို စိုစှတျနှေးစပွေီး ပြျောဝငျလှယျပါတယျ။ ရနှေေးငှရှေု့ခွငျးသညျ ခြှဲပိတျခွငျး ခကျြခငျြးသကျသာကာ အသကျရှုလို့ ပိုကောငျးပါတယျ။ လပွှေနျကဉျြးလူနာမြားကို လလေ့ာခကျြအရ ရနှေေးငှရှေု့နသေောသူမြားသညျ […]
အဖုံးမပိတ်ဘဲ အိမ်သာရေးဆွဲချခြင်းရဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်အန္တရာယ်
အရင်ခေတ်တုန်းကတော့ အိမ်သားဆိုရင် တိုးလျှိုပေါက် အောက်ကိုမြင်နေရတဲ့ အိမ်သာတွေကနေ ယင်လုံအိမ်သာတွေ၊ အခုဆိုရင် ဘိုထိုင်အိမ်သာတွေအထိ လူနေမှုပုံစံတိုးတက်လာတာနဲ့မျှ အိမ်သာတွေဆိုရင်လည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ ပိုညီညွတ်စေဖို့ ဒီဇိုင်းနဲ့ပုံစံတွေ ပြောင်းလဲလာခဲ့ကြပါတယ်။ အခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ဘိုထိုင်အိမ်သာတွေကတော့ နောက်ဆုံးပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့ အိမ်သာပုံစံတွေပါပဲ။ အဖုံးရှိတယ်၊ စနစ်တကျနဲ့ သန့်စင်တဲ့ ရေဆွဲချတဲ့စနစ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပါတယ်ပြောပြော ဘိုထိုင်အိမ်သာကို စနစ်တကျမသုံးစွဲတတ်ရင်လည်း ရောပိုမွှားတွေရဲ့အန္တရာယ်ကို ကြောက်ရဦးမှာပါပဲ။ အဓိကကတော့ အိမ်သာရေဆွဲချတဲ့ကိစ္စပါ။ လူတော်တော်များများဟာ အိမ်သာရေဆွဲချတော့မယ်ဆိုရင် […]
ည ညညျးနကျတဲ့အထိ အိပျယာထဲအထိ ဖုနျးသုံးခွငျးရဲ့ ဆိုးကြိုးမြား
ကျန်းမာရေးပါရဂူကြီးများရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ လူသားတွေအတွက် အကောင်းဆုံး အိပ်စက်အနားယူချိန်ဟာ ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၃ နာရီအတွင်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအဆိုကို ဆေးပညာရှင်များအားလုံးနီးကလည်း လက်ခံထားကြပါတယ်။ ၁၁-၃ အတွင်း အနားမယူပဲ အလုပ်တစ်ခုခု လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေလိမ့်မယ်။ ချက်ချင်းမဟုတ်ပေမယ့် ရေရှည်မှာ ဆိုးဝါးလာစေနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဓိကအရေးကြီးဆုံး အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ အသည်းဟာ ၁၁-၃ အချိန်မှာ လူတို့စားသုံးထားတဲ့ အစားအစာများထဲမှ အဆိပ်အတောက်နဲ့ […]
မိသားစုအပေါ် သိတတ်လိမ္မာတဲ့ သမီးတွေသာ သိနားလည်တဲ့ အခက်အခဲလေးများ မိဘဆိုတာ အပေးပဲ ရှိပြီး အယူ မရှိဘူးလို့ ပြောစမှတ်ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မိသားစုအပေါ် သိတတ်တဲ့ သူအများစုကတော့ သမီးမိန်းကလေးတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်..။ မိသားစုအပေါ် အဲ့လို သိတတ်တဲ့ သမီးတွေမှာ သူများတွေ ထက် ပိုတဲ့ အခက်အခဲတွေ ရှိလို့ နေတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေ ကတော့..၊ (၁) အနစ်နာခံရတယ် သိတတ်တယ်ဆိုတာရဲ့ နောက်မှာ အနစ်နာခံမှုကလည်း တွဲပါလာပါတယ်။ […]